जनकपुरमासमेत उम्मेदवार दिन नसक्ने कस्तो कांग्रेस ? - Ujyaalo Nepal
जनकपुरमासमेत उम्मेदवार दिन नसक्ने कस्तो कांग्रेस ?
अनि त्यो जनकपुरको नगरपालिकाको प्रमुखमा आफ्नो उम्मेदवार समेत दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो काङ्ग्रेस !
जनकपुर मिथिला सभ्यताको केन्द्र । (स्मरणीय छ नेपाली सभ्यता भनेकै उपत्यकाको नेवारी सभ्यता र मिथिला क्षेत्रको मिथिला सभ्यता हो)
जनकपुर–प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको केन्द्र । क्रान्तिकारी नेता सरोजप्रसाद कोइरालाको कर्मभूमि । काङ्ग्रेसका अनेकौँ युवा क्रान्तिकारीहरूको वीरता र बलिदानले सिंचित भूमि ।
पञ्चायती शासनको समयमा सिन्धुली, रामेछाप, ओखलढुंगा जस्ता जिल्लाहरूमा सरकारी दमन, थुन छेकबाट जोगिन आश्रय लिने स्थान । ती जिल्लाहरूमा कोही बिरामी भयो जनकपुरमा गएपछि औषधि, उपचार, भोजन, आवास सबैको व्यवस्था हुन्थ्यो जनकपुरका काङ्ग्रेसी नेता र कार्यकर्ताबाट । मुलुकका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, गान्धीवादी नेता महेन्द्र नारायण निधि र लीला कोइरालाको कर्मभूमि ! मुलुकमा पार्टी प्रतिबन्धित थियो, पार्टी गतिविधि नियन्त्रित थियो तर जनकपुरमा काङ्ग्रेसले खुलारूपमा जिल्ला अधिवेशन गर्न र चुनाव गर्न सक्थ्यो ।
जनकपुरको आरआर क्याम्पस मुलुकभरीमा युवा प्रजातन्त्रवादीहरुको सबैभन्दा ठूलो गढ !
उक्त क्याम्पसका मिथकीय व्यक्तित्वका स्वामी प्रिन्सिपल तथा क्याम्पस प्रमुख रामचन्द्र बहादुर सिंह -क्याम्पसका सबै विद्यार्थीहरूका संरक्षक र अभिभावक ।
उहाँको कार्यकालमा सम्भवत आरआर क्याम्पसका कुनै पनि विद्यार्थी राजनीतिक अभियोगमा गिरफ्तारीमा परेनन्, उहाँले पर्न दिनुभएन । आफ्ना विद्यार्थीहरूका लागि जिल्ला र अञ्चल प्रशासकहरूसँग निरन्तर लड्ने प्रिन्सिपल (पछि उहाँ गण्डकी अन्चालाधीश पनि हुनुभयो)
उम्मेदवार दिने हुतीसम्म नहुने अवस्थामा पुग्यो देउवा -पौडेल नेतृत्वको काङ्ग्रेस । उता नेपालमा काङ्ग्रेस र प्रजातन्त्रको गढ पश्चिमाञ्चल, त्यसको केन्द्र पोखरा त्यहाँ पनि त्यस्तै ।
प्रकाशित: १० बैशाख २०७९, शनिबार ०३:३८